Tech in Blogging ရဲ့ပိုစ့်အားလုံးကို Android ဖုန်းတစ်လုံးရှိရုံနှင့်ဖတ်နိုင် ~ Tech in Blogging
Tech in Blogging ရဲ့ပိုစ့်အားလုံးကို Android ဖုန်းတစ်လုံးရှိရုံနှင့်ဖတ်နိုင်
22:38 Pyae Phyo3comments
မင်္ဂလာပါ။ Tech in Blogging မှအထူးကြိုဆိုလျက်ပါ။ ယခု သတင်းကောင်းကတော့ လူကြီးမင်းတို့အားလုံးနီးနီး Android phone တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်နေကြပါပြီ။ Tech in Blogging မှ Android version နဲ့ထွက်နေပါပြီ။ တခြားဖုန်းနဲ့ရအောင်ကြိုးစားကြည့်မှာပါ။ ကဲ။ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုက်ကြစို့ဗျာ။
Download Now ကိုကလစ်ပါ။ Page တစ်ခုပေါ်လာမယ်။ Skip Ad ကိုကလစ်ပါ။ ပြီးရင် Download ဆွဲနိုင်ပါပြီ။ အဆင်ပြေပါစေ။
Tech in Blogging (v.1.0)
(This is our icon for Version 1.0. If you use this icon for illegal, all those faults will not be responsible to us.)
DOWNLOAD NOW! (UPDATED!)
နောက်ထပ် Version အသစ်တွေလာဦးမည်။ မျှော်။
Posted in: Applications, Mobile phones, Websites Information
22 July 2013 at 08:07 Reply
22 July 2013 at 12:21 Reply
http://adf.ly/Sb2yq မှာအသစ်ထည့်လိုက်ပါပြီ။ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲကြည့်ပါ။ အဆင်မပြေရင် ygnblogger@blumail.org ကိုအပ်ပြီးမေးနိုင်ပါတယ်။
မောင်ကလိ (အခြေခံနည်းပညာ) says:
2 January 2015 at 03:01 Reply